Nhau - Mexico International Auto Zvikamu Expo 2020
Zita Rekuratidzira: Mexico International Auto Zvikamu Expo 2020
Exhibition nguva: Chikunguru 22-24, 2020
Nzvimbo: Centro Banamex Exhibition Center, Mexico Guta
Central America (Mexico) International Auto zvikamu uye mushure mekuratidzira kwekuratidzira 2020
Exhibition nguva: Chikunguru 22-24, 2020 (kamwe pagore)
Murongi: Frankfurt Exhibition (USA) Ltd.
Mari yezvikamu Frankfurt Exhibition (Mexico) Limited
Sekuratidzira kukuru uye kwakanyanya kukosha muMexico neCentral America mushure mekutengesa musika, iyo 20th International Auto zvikamu uye mushure mekutengesa kuratidzwa kweCentral America (Mexico) ichaitirwa muBanamex Exhibition Center, Mexico City kubva muna Chikunguru 22 kusvika 24, 2020. Kune varatidziri vanopfuura mazana mashanu vanobva pasirese pasirese, kusanganisira vanobva kuArgentina, China, Germany, Turkey, United States neTaiwan. Vanopfuura zviuru makumi maviri zvevashanyi vane hunyanzvi kubva indasitiri yemotokari vakauya kuzoshanya.
Varatidziri vanogutsikana nemhedzisiro yechiratidziro, icho chinoratidza zvakare kukosha kwe Automechanika Mexico muindastiri. Zvakare, iyo showa rave iro hombe chikuva chekubatanidza vakuru vanoita sarudzo mumusika wemotokari muMexico neCentral America.
Pakati pekuratidzwa kwemazuva matatu, vanoita sarudzo kubva kunhengo dzeindasitiri kubva kuMexico, Latin America nedzimwe nyika varipano kuti vawane zvigadzirwa zvemberi, masevhisi pamwe nekudyidzana mukati mekambani, vanzwisise kuvandudzwa kwemota uye nekuwedzera bhizinesi ravo.
Mamiriro ezvinhu emusika:
China neMexico nyika mbiri dzichiri kusimukira uye dzakakosha nyika dziri kusimukira. Ivo vaviri vari padanho rakakomba rekugadzirisa nekusimudzira. Ivo vakatarisana nemabasa akafanana nematambudziko, uye nyika mbiri idzi dzinopiana mikana yekusimudzira. Musi waNovember 13, 2014, Mutungamiri weChinese Xi Jinping akaita hurukuro nemutungamiri weMexico, PEIA, muGreat Hall yevanhu. Vatungamiriri vaviri venyika vakaisa gwara uye chirongwa chekusimudzira hukama hweChina Mexico, uye vakasarudza kuumba maitiro matsva ekubatana kwe "one two matatu" kusimudzira budiriro yeChina Mexico yakakwana kudyidzana.
Mexico ndiyo imwe yenyika dzine huwandu hukuru kwazvo hwezvibvumirano zvekutengeserana zvepachena pasirese. Makambani ari muMexico anogona kutenga zvikamu nezviwanikwa kubva kunyika dzakawanda, uye kazhinji anonakidzwa nekubhadhariswa mutero. Makambani anonakidzwa zvizere NAFTA mutero uye zvivakwa zvido. Mexico inotarisisa kusimudzira kwakasiyana-siyana kwekugadzira uye maindasitiri ebasa, uye yakabudirira kumisikidza hukama hwehupfumi neEurope, Asia neLatin America kuburikidza nezvibvumirano zvemahara zvekutengeserana nezvibvumirano nemasangano ezvehupfumi.
MuLatin America, Mexico yakasaina zvibvumirano zvemahara zvekutengeserana (TLC) neHonduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Chile, Nicaragua neUruguay nekuda kwezvigadzirwa nemabasa emaindasitiri, uye yakasaina zvibvumirano zvekudyidzana kwezvehupfumi (ACE) ne Argentina, Brazil, Peru, Paraguay neCuba.
Iine huwandu hwevanhu vangangoita mamirioni zana, Mexico ndiyo yechipiri musika mukuru muLatin America uye ndeimwe yeakakura kwazvo pasirese.
Chikamu chemotokari ndicho chikamu chikuru chekugadzira muMexico, chichiverengera 17.6% yebazi rekugadzira uye ichipa 3.6% kuGDP yenyika.
Mexico ikozvino ndiyo nyika yechina pakukura mota kunze kwenyika mushure meJapan, Germany neSouth Korea, sekureva kweCosmos yeMexico. Zvinoenderana neindasitiri yemotokari yeMexico, pakazosvika 2020, Mexico inotarisirwa kuve yechipiri.
Zvinoenderana nedhata reMexicoan Automobile Industry Association (AMIA), musika wemotokari weMexico wakaramba uchikwira muna Gumiguru 2014, iine huwandu hwekutengesa, hwekutengesa uye hwekutengesa kunze kwenyika. Muna Gumiguru gore rino, kuburitswa kwemotokari dzakareruka muMexico kwakasvika 330164, kuwedzera kwe15.8% panguva imwechete yegore rapfuura; mumwedzi gumi yekutanga, huwandu hwenyika hwaive 2726472, kuwedzera kwe8.5% gore-ne-gore.
Mexico yakava mutengesi wechishanu wepasi rose wezvimotokari uye zvigadzirwa, uye zvigadzirwa zvaro zvinonyanya kupihwa kumotokari dzemagungano eMexico. Mutengo wegore rapfuura wakasvika pamadhora makumi matatu nemashanu emadhora, zvichiratidza kugona kweindasitiri yezvimotokari, izvo zvinowedzera kusimudzira vanotengesa venyika. Pakupera kwegore rapfuura, huwandu hwekuburitsa hweindasitiri yezvipenga hwakapfuura 46%, ndiko kuti, US $ 75 bhiriyoni. Inofungidzirwa kuti kukosha kweindasitiri kunosvika US $ 90 bhiriyoni mumakore matanhatu anotevera. Sekureva kwezviremera, giredhi 2 uye nhanho 3 zvigadzirwa (zvigadzirwa izvo zvisingade kugadzirwa, senge screws) zvine hukuru hukuru hwekusimudzira tarisiro.
Inofungidzirwa kuti muna 2018, kugadzirwa kwemotokari kweMexico pagore kuchasvika mamirioni 3.7 emotokari, zvakapetwa kaviri zvakaburitswa muna2009, uye kudiwa kwayo kwezvikamu zvemotokari zvichawedzerwa zvakanyanya; panguva imwecheteyo, avhareji hupenyu hwemota dzepamba muMexico makore gumi nemana, izvo zvinogadzirawo kudiwa kukuru uye kudyara kwebasa, kugadzirisa uye kutsiva zvikamu.
Iko kuvandudzwa kweindasitiri yemotokari yeMexico kunobatsira epasirese zvikamu zvemotokari zvikamu. Kusvika pari zvino, 84% yepasirose yepamusoro 100 yezvigadzirwa zvemotokari vagadziri vakaisa mari nekugadzira muMexico.
1. Zvikamu uye masisitimu: zvikamu zvemotokari uye zvinoriumba, chassis, muviri, mota yemagetsi unit uye yemagetsi system uye zvimwe zvinoenderana zvigadzirwa.
2. Zvishongedzo uye nadzurudzo: mota accessories uye zvigadzirwa zvemota, akakosha zvishandiso, kugadziridza mota, kugadzirisa dhizaini yeinjini chimiro, dhizaini dhizaini, kutaridzika kuchinjika uye zvimwe zvinoenderana zvigadzirwa.
3. Kugadzirisa uye kugadzirisa: michina yekuchengetedza chiteshi uye maturusi, kugadzirisa muviri uye kupenda maitiro, kugadzirisa chiteshi manejimendi
4. Izvo uye manejimendi: mota musika manejimendi manejimendi uye software, mota yekuyedza michina, mota mutengesi mutengesi manejimendi uye system, mota inishuwarenzi software uye system uye zvimwe zvinoenderana zvigadzirwa.
5.Gesi chiteshi uye kuwacha mota: gasi chiteshi chebasa uye zvishandiso, michina yekuwacha mota